I-china ipholiyesta yenaliti-yamanqindi yaziva ifektri mveliso kunye nabathengisi | Xintian
Ukusetyenziswa kwayo okuphambili kwifayibha yokwenziwa, ukusuka kwinqwelomoya, kusenzelwa indibaniselwano enye engaqhelekanga yokuma okumileyo; Ukujongwa kwicala lecandelo, inaliti ehamba kwiAngle ethile kwindiza ejongene nayo yenza ukuba ifayibha enye ibonise imeko entsonkothileyo.
1, Ukungena komoya okuhle: xa kuthelekiswa nezinye izinto zokucoca ulwelo, umahluko omkhulu kukuma kwepore kwizinto zokucoca ulwelo.
2, Ukusebenza ngokuqokelelwa kothuli oluphezulu: ukuziva okufunwayo (ibhegi yothuli) inesitshixo esinye sefibre, ukuze kwakhiwe indawo encinci kunelaphu elilukiweyo.
I-3, ilungele ukucoca uthuli olunamandla aphezulu. Ke ngoko, ibonisa ukusebenza kwayo okuhle kakhulu kukucoca ulwelo kunye nefuthe lokusetyenziswa okuhle ekubetheni, ukubuyisa umjikelezo ojikelezayo, ukubetha umsantsa, ukuvuthela umsesane womoya kunye nokucoca ibhegi.
4, inaliti waziva izinto zokucoca ulwelo (umqokeleli wengxowa yothuli) iintlobo
(1) ukuziva okuqhelekileyo okufunekayo: i-polypropylene, i-vinylon, i-polyester kunye nezinye izinto ezifunekayo.
(2) Iqondo lobushushu eliphakathi nelinganyangekiyo livakalelwa kukuba: iqondo lobushushu elisebenzayo le-NOMEX yenaliti laziva ngathi yi-200 ℃.
Ingxowa inezibonelelo zokungabikho, ukuphakama komoya olungileyo, ukuqokelela uthuli oluphezulu kunye nokuphila ixesha elide, ezikhethekileyo kwiingxowa zokucoca eziqhelekileyo. Inobushushu obuphakathi ngokuphakathi, kwaye inokufikelela kwi-130 "C ngephanyazo. Ikwanayo nokumelana okuphakathi kweasidi kunye nealkali. Kunye nokumelana kakuhle kakhulu.
Ubunzima: 500g / m²
Material: Ipholiyesta / ipholiyesta intambo zeendawana Ukutyeba: 1.75mm
Ukungena: 16 m³ / m² · min
Amandla olawulo lobushushu:> 1100N / 5'20cm Amandla olawulo lweLatitude:> 1400N / 5.20cm Amandla olawulo lobushushu: <25%
Amandla olawulo lweLatitude: <45%
Ubushushu bokusetyenziswa: .; 130 ° C
Unyango lwasemva kokuphuma: ukucula, ukukhahlela, ukuthengisa ubushushu
Egqithileyo Ipholiyesta ye-Antistatic yenaliti-igqobhoze iFelt Bag
Okulandelayo: Ubungqina bePolyester eneenaliti ezine-Felt Bag (engenamanzi, i-antistatic, ubungqina beoyile)
Ipholiyesta yePhepha leenaliti-eziQhelekileyo, Isamente Uqokeleli Uthuli, Isihluzi seFelt Bag, I-Fibreglass yeenaliti-Isihluzi seFilter yeFilter, Uhlobo lweBhegi luQokelele uthuli, Ingqokelela yothuli,